Bitcoin Monitor X, tevera kufambira mberi kweBitcoin pane yako Mac | Ndinobva mac
Bitcoin Monitor X, tevera kufambira mberi kweBitcoin pane Mac yako
Uye isu tine mashoma mashoma ekunyorera aripo anotibvumidza kuti titarise mitengo yemhando iyi yemari uye mune iyi kesi ne Bitcoin Monitor X, Izvo ndezvekukwanisa kutevedzera mune chaiyo nguva mutengo weBitcoin uye mamwe ese akasarudzika emari aripo izvozvi.
Mune ino kesi, inyaya yekuona kukosha munguva chaiyo kubva kuMac pachayo nekungodzvanya paApp icon pane yebasa rebasa. Unogona ona mitengo munguva chaiyo kubva Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Ripple, IOTA, Monero, Dash.
Izvo zvakare zvinowedzera tafura kuti uone iyo nhoroondo yemutengo wemari chaiyo mari uye kuvandudzwa kwavo panguva yatinogona kuchinjira kune kwedu kufarira. Bitcoin Monitor X, inosanganisira zvinopfuura makumi manomwe zviratidzo zvakasiyana zvekuchinja kukuru uye rutsigiro rwemhando dzinopfuura makumi maviri neshanu dzemari dzedenga. Wedzera mhando dzemari kubva kuWestern neEastern Europe, mari hombe dzeAsia neUS.
Ehezve iko kunyorera kuchinjika kune macOS uye kunowedzera iro rima theme kune yakapusa asi inoshanda interface. Shanduko dzemutengo dzinogona kunyatsoonekwa nekuda kwekodhi kukara uye une mukana wekugadzirisa saizi yefonti kuti uone zviri nani zvehunhu hwarinoratidza. Zvenguva uye kwechinguva chidiki iko kunyorera kwakasununguka kurodha pasi, saka kana iwe uri mumwe wevaya vanofarira kutevera mutengo wemari chaiyo, unogona kunakidzwa neapp pane yako Mac.
Bitcoin Monitor Xvakasununguka
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac zvirongwa » Mac App Store » Bitcoin Monitor X, tevera kufambira mberi kweBitcoin pane Mac yako
Kurumidza kushandura pakati pemhando dzakasiyana dzemifananidzo neCreative Convert